Qaab - KingHOOD oo iskiis u System Co., Ltd.
Taageerada email psa.kinghood@gmail.com
Taageerada Call 0086-512-57710572
qalabka qaadashada ogsijiin
Ogsijiin VPSA Small Plant
KingHOOD oo iskiis u System waa cilmi iyo horumarka ganacsi farsmada heerka sare ah oo ku hawlan in codsiga ah ee qalabka oxygen VPSA. Ku tiirsan faa'iidooyinka xirfadeed, shirkadda ayaa koox maareynta u fiican, sidoo kale waxay leedahay xarumaha hardware qumman iyo kooxda waayarag ah. Nidaamka qumman iyo maamulka macquul ah ay hubisaa in shirkadda samayn fiican dhinac kasta. KingHOOD waxaa ka go'an in dhammaan noocyada kala duwan ee VPSA cilmi qalabka oxygen iyo horumarinta, design, wax soo saarka, iibinta, adeegga la xiriira, bixinta talooyin farsamo iyo xal.
KinHOOD la shaqeeyaa ah shirkadaha soo socda taasoo keentay in dunida isgaarsiinta:
1, Enterprise khayraadka aadanaha
maamulka ugu weyn iyo shaqaalaha farsamada ee KingHOOD ayaa dhamaantood ka shaqeeya warshadaha qalabka gaaska ka badan 10 sano, oo dhan waxay leeyihiin waayo-aragnimo xirfadeed oo badan. Muddo dheer, waxaan soo koobay ku dhaqanka on hal dhinac, iyada oo injineerada farsamo booqasho ku site, ka heli dhibaatada, oo mar kale iyo mar kale loo hagaajiyo technology ee. Isla mar ahaantaana, aan weli diiradda on technology warshadaha, ay qaataan khibrad sare.
2, Design & saarka awoodda
Injineerada Our waa resposible oo dhan design iyo sawiro for our-soo-saarka. Waxaan beleivev technology ugu sareeya waa xudunta u ah horumarinta shirkadda ee suatainable. Intaa waxaa dheer, KinHOOD xajiya xiriiri la shirkadaha keentay adduunka ee isgaarsiinta, taasoo ah hab degdeg ah ee horumarinta technology. Iyada oo adpoting shirkadaha world'd keentay technology sida Bayer, Tosoh, iskaashi la Chinese Academy of Science, South China University of Technology, Haicheng Technology iyo qaybaha kale ee cilmi sayniska. Sidoo kale iyada oo record hawlgalka qalab u gaar ah, dhinacyada oo dhan, kuwaas oo u wadin inuu soo qalab KingHOOD ayaa qaababka ay u gaar ah, oo ay had iyo jeer technology xoogaa la safka hore ee warshadaha. Sida rakibaadda shaandho kelli ee, qaybinta socodka hawada, hagaajinta nidaamka gacanta, habka qaabeynta, nidaamka gaaska waaweyn, iwm KingHOOD ee codsiga joogtada ah ee technology cusub yihiin kor u qaadida horumarka of technology ee warshadaha ee waqti isku mid ah.
design heer sare loo baahan yahay in ay ku tiirsanaadaan awoodda wax soo saarka aad u fiican. Waxaan leenahay karti aad ku qorshayso iyo soosaarka qalabka dhamaystiran. KingHOOD leeyihiin warshad gaar ah kelli shaandho, workshop warshadaha casriga ah, ganacsiga caqli meel ay xafiis iyo kooxda adeegyada rakibaadda xirfadeed.
3, Tayada iyo Service
tayada iyo adeega qalabka ee waa mid aad muhiim u ah survial shirkadda ee, iyo sidoo kale waa furaha horumarka. Waxaan anfaco maamulka tayo adag, waxaan isku dayi si loo hagaajiyo tayada adeegga on-site. Waxaan ula socdaan qalab 's guddoominta, debugging qalabka, dabeecad adeegga iyo qancinta macaamiisha, waxaan wax ku qoro ka dib markii - record adeegga macaamiisha kasta. Waxaan qorshaynaynaa shaqaalaha si contactcustomer telefoon, fax, email iyo on-site booqasho. Si aad u ogaato qalab socda xaaladda, caawimaad iyo hanuunin macaamiisha ah u ilaaliyaan qalabka, xusuusi macaamiisha waqtiga si ay ugu bedesho qaybaha firaaqada. Waxaan aaminsanahay in firfircoon, adeeg degdeg ah iyo xirfad ka dhigi doonaa macaamiisha kasta ogaadaan adeegga qadarin our.
2018 Macaamiisha Table
macaamiisha Name Goobta Codsiga Capacity
Yunnan Forsetry maalgashiga iyo saxarka Yunnan 10 metrik bleaching saxarka 360Nm 3/ h
Chenming Grou (Jinlin) Jilin delignification ogsijiin 700Nm 3/ h
Tiger Forest & Paper Group Hunan 8 tan oo bleaching saxarka 350 nm 3/ h
ChiTianhua Paper Guizhou 20 metrik baasaboorka saxarka bleaching 1400Nm 3/ h
Shaowuzhongzhu Fujian 4.5 metric baasaboorka saxarka bleaching 400Nm 3/ h
Huaihua Juntai Hunan 40 metrik bleaching saxarka 2000Nm 3/ h
Lee Man Paper dhagaxshiidka Chongqing 12 metrik bleaching saxarka 500Nm 3/ h
Fengli Paper Mill Hunan 5 metrik bleaching saxarka 200Nm 3/ h
Yongfeng Paper Mill Sichuan 12 metrik bleaching saxarka 700Nm 3/ h
technology Haisum Vietnam 10 metrik bleaching saxarka 400Nm 3/ h
kooxda Chenming Shandong 15 metrik bleaching saxarka 600Nm 3/ h
kooxda Danhua Jiangsu ilaalinta BAY'ADDA 500Nm 3/ h
HSIK Wang Shan Twinking Star Hunan Ogsijiin barafku -enriched 2000Nm 3/ h
Qingdao Taiwan Fiber Glass Shangdong Glass dikhaw -fuel ogsijiin kariyaha 1750Nm 3/ h
warqad Huajin Jiangxi 10 metrik bleaching saxarka 600Nm 3/ h
warqad Zhenxing Liaoning 12 metrik bleaching saxarka 700Nm 3/ h
Haisum SKD Project Bangladesh ilaalinta BAY'ADDA 150Nm 3/ h
dhagaxshiidka saxarka Laishan Sichuan Baasaboorka saxarka bleaching 380Nm 3/ h
Kediweijing Guangdong Glass ogsijiin kariyaha dikhaw ku hodanaynta 400 nm 3/ h
Zhuji Paper dhagaxshiidka Guangdong bleaching saxarka 350 nm 3/ h
Xingchangsheng Jiangsu Daawaha dikhaw 250Nm 3/ h
Yunjinglin Paper Yunnan Saxarka bleaching saxarka bleaching 550Nm 3/ h
Wanjing Technology Myanmar Buuxinta saldhigga for jarida (3 qaybood) 50Nm 3/ h
Suzhou Zhong cái Angola Buuxinta saldhigga for jarida (2 qaybood) 50Nm 3/ h
Suzhou zhonghua Mozambique Buuxinta saldhigga for jarida (2 qaybood) 50Nm 3/ h
Liangmianzhen Jiangzi bleaching saxarka 500Nm 3/ h
Shuangdeng warqad Mill Jiangsu bleaching saxarka 240Nm 3/ h
SFI Malaysia ilaalinta BAY'ADDA 600Nm 3/ h
SKK Philipines metrik EAF25 500Nm 3/ h
Xinhui copper Xinjiang dikhaw copper 1000Nm 3/ h
Kooxda galaas Shandong Fiber Shangdong Glass dikhaw kariyaha 3250Nm 3/ h
warqad Quanlin Shangdong bleaching saxarka 3000Nm 3/ h
Luyang Shangdong Ogsijiin combusation ku hodanaynta 500Nm 3/ h
Wuliangye Group Sichuan Glass dikhaw kariyaha 150Nm 3/ h
Jnshan kiimikada Indrusty Xaanaan qaadashada gaaska ku hodanaynta ogsijiin 800Nm3 / h
Double A Tailand bleaching saxarka 800Nm3 / h
Longmang barafku Sichuan dikhaw 2500Nm 3/ h
Laibin saxarka Mill Guangxi bleaching saxarka 500Nm 3/ h
kooxda Changhai Jiangsu Glass dikhaw kariyaha 1300Nm 3/ h
Junlin dawooyinka Hebei Pharmaceutical Kiimikooyinka 500Nm 3/ h
Xingbang International Russia bleaching saxarka 500Nm 3/ h
Shandong Fiber Glass Shangdong Glass dikhaw kariyaha 1400Nm 3/ h
Jiali Gas Jinagxi Glass dikhaw kariyaha 1800Nm 3/ h
Huabei Jingmao Gansu ogsijiin ku hodanaynta 6000Nm 3/ h
Wuhai barafku Mengu ogsijiin ku hodanaynta 4000Nm 3/ h
Huabo warshadaha Lead Anhui dikhaw Lead 3000Nm 3/ h
Shandong Fiber Glass Shangdong Glass dikhaw kariyaha 2800Nm 3/ h
Jinhong Gas Shangdong Glass dikhaw kariyaha 3850Nm 3/ h
Technology Maolian Tianjin dikhaw copper 3334Nm 3/ h
inhong Gas Shangdong Glass dikhaw kariyaha 2600Nm 3/ h
Dexing Industry Lead Jiangxi dikhaw Lead 2000Nm 3/ h
Gansu Huayi Gansu dikhaw Lead 1300Nm 3/ h
Jiangsu Jihua Jiangsu daawaynta biyaha wasakhaysan 2200Nm 3/ h
Shengshihuayuan Guangdong matoor Allena 130Nm3 / h
Beijingguodian Guizhou matoor Allena 300Nm3 / h
Qianrunkaiyuan Beijign matoor Allena 100Nm3 / h
Qianrunkaiyuan Shandong matoor Allena 30 * 2Nm3 / h
Fujain Newland Gas Tianjin Maolian Chian Railway Construction Group CO., LTD Jilin Zambia Congo matoor Allena dikhaw copperdikhaw copper 1120Nm3 / h 4000Nm3 / h 5000Nm3 / h
Denitration isticmaalaya techn denitration Allena ...